ထူးဆန်းစွာ တည်ရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က သဘာဝတွင်းနက်ကြီး – CantWait2Say
ထူးဆန်းစွာ တည်ရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က သဘာဝတွင်းနက်ကြီး
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေများစွာရှိပြီး သုတေသနသမားတွေနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အဖြေမထုတ်နိုင်သေးတဲ့ နေရာတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုနေရာတွေထဲကမှ ထူးဆန်းစွာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ သဘာဝတွင်းနက်ကြီးတွေ အကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါဟာ အမေရိကန်မှာ ၇ှိတဲ့ တွင်းဖြစ်ပြီး ဒီထူးဆန်းတဲ့ တွင်းအကြောင်း ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။ဘယ်လောက်နက်တယ်ဆိုတာလည်း တိုင်းတာလို့ မရသေးပါဘူး။
Monticello Dam ဆိုတဲ့ ကန်ကြီးထဲက တွင်းနက်ကြီးက ထူဆန်းပါတယ်။အဝိုင်းပေါက်ကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီး ရေတွေဟာ ဒီတွင်းထဲကျဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေတွေက ပြည့်လျှံသွားခြင်းမရှိပဲ အမြဲဆင်းနေတာဖြစ်ပြီး ဘယ်ကို ရောက်သွားလဲ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။
Bahamas တွင်းကြီးထဲမှာတော့ ရေတွေပြည့်နေပြီး ဒီတွင်းရဲ့ အနက်ကို ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။ဒီအောက်မှာတော့ ကောင်းကင်တံခါးပေါက်ဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီရှိပြီး ဒီတွင်းဟာ လွန်ခဲ့တြ့ နှစ်သောင်းဂဏာန်းလောက်ထဲက တည်ရှိနေတာလို့ ယူဆကြပါတယ်။
တက္ကဆက်က ပန်းခြံထဲမှာ ရှိတဲ့ ငရဲတွင်းဆိုတဲ့ တွင်းထဲ အလုပ်သမားတွေ စူးစမ်းလေ့လာရေးယာဉ်တွေ ထည့်လိုက်ရင် အပေါ်ပြန်မတက်လာတော့ပဲ သေမင်းစခန်းကို မြန်းသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွင်းရဲ့ အတိမ်အနက်ကိုလည်း ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။
Caribbean ပင်လယ်မှာ ရှိတဲ့ အပြာရောင်တွင်းကြီးထဲကို ဘယ်သုတေသနသမားမှ မဆင်းပါဘူး။ပြန်တက်လာဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို ရေငုပ်ယာဉ်တွေလဲ ခရီးမသွားနိုင်ပဲ အမှောင်တိုက်ထဲဖျက်သန်းပြီး ပျက်ပျက်ကုန်တာဖြစ်ပါတယ်။
Dean’s Blue Hole ဆိုတဲ့ တွင်းကြီးဟာ ကမ်းစပ်နားတင်ရှိပြီး အဲ့နားကို လှေရော လူရောမဖြတ်ကြပါဘူး။ပုံပြင်တွေအရတော့ မွန်းစတားတကောင်ရဲ့ လှိုဏ်ဂူလို့ နာမည်ကြီးတာဖြစ်ပေမယ့် တိကျတဲ့ သုတေသနတော့ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။
New Zealand မှာ ရှိတဲ့ တွင်းပေါက်ကြီးဖြစ်ပြီး လူတွေဟာ ဖော်ပြထားတဲ့ မီတာလောက်ထိသာ ဆင်းနိုင်သေးတာဖြစ်ပြီး ခရီးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။
ရုရှားမှာ ရှိတဲ့ The Mir Mine ဆိုတဲ့ နေရာဖြစ်ပြီး စိန်တူးဖော်ရေး လုပ်ရာကနေ တွေ့ရတဲ့ တွင်းကြီးဖြစ်ပြီး ဒီတွင်းရဲ့ သက်တမ်းဟာ နှစ်သန်းချီရှိမယ်လို့ တွက်ဆရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါလဲ ရုရှားစိန်တွင်းနားက တွင်းဖြစ်ပြီး ဒီတွင်းတွေဟာ တူးဖော်ရေး မလုပ်ခင်ကတည်းက တည်ရှိတဲ့ တွင်းကြီးတွေဖြစ်ပြီး စက်ဝိုင်းပုံစံညီညာစွာရှိနေခြင်းက ဥက္ကာခဲတွေရဲ့ ပယောဂမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်.။
ဒါကတော့ အသည်းပုံအိုင်ဖြစ်ပြီး အမှန်က တွင်းနက်ကြီးတခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ရဲ့ သင်္ကေတအဖြစ် ဒဏ္ဍာရီတွေ ပေါ်ထွက်လာပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း 120000 ထဲက ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် Utah မှာ ရှိတဲ့ သတ္တုတွင်းဖြစ်ပြီး အရစ်ကြောင်းတွေနဲ့ ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းတဲ့ တွင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။
Guatemala မှာ 2010 က တွေ့ခဲ့ရတဲ့ တွင်းနက်ကြီးဖြစ်ပြီး စက်ရုံပေါင်း သုံးခုလောက်ပြိုပျက်ပြီးမှ သိရတဲ့ တွင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွင်းကြီးရဲ့ အနက်ကို မတိုင်းတာနိုင်သေးပေမယ့် သတ္တုပိုက်တွေ ချတဲ့အခါ မဆုံးခင်မှာပဲ ပိုက်တွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့ အပူတွေ စီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ထူးဆနျးစှာ တညျရှိနတေဲ့ ကမ်ဘာပျေါက သဘာဝတှငျးနကျကွီး
ကမ်ဘာပျေါမှာ ထူးဆနျးတဲ့ အစိတျအပိုငျးတှမြေားစှာရှိပွီး သုတသေနသမားတှနေဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ အဖွမေထုတျနိုငျသေးတဲ့ နရောတှရှေိပါတယျ။ဒီလိုနရောတှထေဲကမှ ထူးဆနျးစှာ ဖွဈတညျနတေဲ့ သဘာဝတှငျးနကျကွီးတှေ အကွောငျး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဒါဟာ အမရေိကနျမှာ ရှိတဲ့ တှငျးဖွဈပွီး ဒီထူးဆနျးတဲ့ တှငျးအကွောငျး ဘယျသူမှမသိပါဘူး။ဘယျလောကျနကျတယျဆိုတာလညျး တိုငျးတာလို့ မရသေးပါဘူး။
Monticello Dam ဆိုတဲ့ ကနျကွီးထဲက တှငျးနကျကွီးက ထူဆနျးပါတယျ။အဝိုငျးပေါကျကွီးဖွဈနတောဖွဈပွီး ရတှေဟော ဒီတှငျးထဲကဆြငျးနတောဖွဈပါတယျ။ဒီရတှေကေ ပွညျ့လြှံသှားခွငျးမရှိပဲ အမွဲဆငျးနတောဖွဈပွီး ဘယျကို ရောကျသှားလဲ ဘယျသူမှ မသိပါဘူး။
Bahamas တှငျးကွီးထဲမှာတော့ ရတှေပွေညျ့နပွေီး ဒီတှငျးရဲ့ အနကျကို ဘယျသူမှ မသိပါဘူး။ဒီအောကျမှာတော့ ကောငျးကငျတံခါးပေါကျဆိုတဲ့ ဒဏ်ဍာရီရှိပွီး ဒီတှငျးဟာ လှနျခဲ့တွ့ နှဈသောငျးဂဏာနျးလောကျထဲက တညျရှိနတောလို့ ယူဆကွပါတယျ။
တက်ကဆကျက ပနျးခွံထဲမှာ ရှိတဲ့ ငရဲတှငျးဆိုတဲ့ တှငျးထဲ အလုပျသမားတှေ စူးစမျးလလေ့ာရေးယာဉျတှေ ထညျ့လိုကျရငျ အပျေါပွနျမတကျလာတော့ပဲ သမေငျးစခနျးကို မွနျးသှားကွတာဖွဈပါတယျ။ဒီတှငျးရဲ့ အတိမျအနကျကိုလညျး ဘယျသူမှမသိပါဘူး။
Caribbean ပငျလယျမှာ ရှိတဲ့ အပွာရောငျတှငျးကွီးထဲကို ဘယျသုတသေနသမားမှ မဆငျးပါဘူး။ပွနျတကျလာဖို့ မဖွဈနိုငျသလို ရငေုပျယာဉျတှလေဲ ခရီးမသှားနိုငျပဲ အမှောငျတိုကျထဲဖကျြသနျးပွီး ပကျြပကျြကုနျတာဖွဈပါတယျ။
Dean’s Blue Hole ဆိုတဲ့ တှငျးကွီးဟာ ကမျးစပျနားတငျရှိပွီး အဲ့နားကို လှရေော လူရောမဖွတျကွပါဘူး။ပုံပွငျတှအေရတော့ မှနျးစတားတကောငျရဲ့ လှိုဏျဂူလို့ နာမညျကွီးတာဖွဈပမေယျ့ တိကတြဲ့ သုတသေနတော့ ပွုလုပျနိုငျခွငျးမရှိပါဘူး။
New Zealand မှာ ရှိတဲ့ တှငျးပေါကျကွီးဖွဈပွီး လူတှဟော ဖျောပွထားတဲ့ မီတာလောကျထိသာ ဆငျးနိုငျသေးတာဖွဈပွီး ခရီးဆုံးမဟုတျပါဘူး။
ရုရှားမှာ ရှိတဲ့ The Mir Mine ဆိုတဲ့ နရောဖွဈပွီး စိနျတူးဖျောရေး လုပျရာကနေ တှရေ့တဲ့ တှငျးကွီးဖွဈပွီး ဒီတှငျးရဲ့ သကျတမျးဟာ နှဈသနျးခြီရှိမယျလို့ တှကျဆရတာဖွဈပါတယျ။
ဒါလဲ ရုရှားစိနျတှငျးနားက တှငျးဖွဈပွီး ဒီတှငျးတှဟော တူးဖျောရေး မလုပျခငျကတညျးက တညျရှိတဲ့ တှငျးကွီးတှဖွေဈပွီး စကျဝိုငျးပုံစံညီညာစှာရှိနခွေငျးက ဥက်ကာခဲတှရေဲ့ ပယောဂမဟုတျဘူးလို့ ဆိုလို့ရပါတယျ.။
ဒါကတော့ အသညျးပုံအိုငျဖွဈပွီး အမှနျက တှငျးနကျကွီးတခုသာ ဖွဈပါတယျ။အခဈြရဲ့ သင်ျကတေအဖွဈ ဒဏ်ဍာရီတှေ ပျေါထှကျလာပွီး လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး 120000 ထဲက ရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျ Utah မှာ ရှိတဲ့ သတ်တုတှငျးဖွဈပွီး အရဈကွောငျးတှနေဲ့ ကယျြပွနျ့နကျရှိုငျးတဲ့ တှငျးကွီးဖွဈပါတယျ။
Guatemala မှာ 2010 က တှခေဲ့ရတဲ့ တှငျးနကျကွီးဖွဈပွီး စကျရုံပေါငျး သုံးခုလောကျပွိုပကျြပွီးမှ သိရတဲ့ တှငျးကွီးဖွဈပါတယျ။ဒီတှငျးကွီးရဲ့ အနကျကို မတိုငျးတာနိုငျသေးပမေယျ့ သတ်တုပိုကျတှေ ခတြဲ့အခါ မဆုံးခငျမှာပဲ ပိုကျတှဟော ပွငျးထနျတဲ့ အပူတှေ စီးလာတာဖွဈပါတယျ။
အမြဲလှပနေဖို့ဆိုတာ မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့စိတ်ကူးဆိုပေမယ့် ဂရုစိုက်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပြသနာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ သင့်ကိုလှပစေမယ့်အပြင် အချိန်ကုန်ငွေကုန်သက်သာစေမယ့် အလှအပရေးရာလျို့ဝှက်ချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။ 1.လှပတဲ့ဆံပင်အတွက် သင်ဟာအဆီများတဲ့ဆံပင်ပိုင်ရှင်ဆိုရင်တော့ အိမ်သုံးဆား(သို့)ပင်လယ်ဆားက အဖြေတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။သင်သုံးနေကျခေါင်းလျှော်ရည်ထဲကို စားပွဲတင်ဆာ3းဇွန်းခန့်ရောထည့်ပြီး လျှော်ပေးပါက ဆံပင်အရင်းအဖျားမကျန် ကျန်းမာသန်စွမ်းစေမှာပါ။ 2.မျက်ကွင်းညိုရင် ကော်ဖီအနည်ကျနဲ့အုန်းဆီကို အချိုးအစားညီမျှစွာရောစပ်ပြီး သင့်မျက်လုံးအောက်ကို 15မိနစ်ခန့်ထားပေးခြင်းဖြင့် သင့်မျက်လုံးတွေလန်းဆန်းနေမှာပါ။တစ်ပတ်ကို ဤနည်းအတိုင်း …
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် 20 က ပုံတွေကို ဒီနေ့အချိန်မှာ ပြန်ရိုက်ခဲ့ကြဝယ်
These People Try To Recreate Their Childhood Photographs And The Outcome Is Hilarious. လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် 20 က ပုံတွေကို ဒီနေ့အချိန်မှာ ပြန်ရိုက်ခဲ့ကြဝယ် 1. လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် 20 က …
“ ဟင်းချက်စရာတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ပန်းချီကားများ..”
“ ဟင်းချက်စရာတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ပန်းချီကားများ..” အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် နယူးဇီလန်သူ Kristina webb ဟာ သူမရဲ့ ပန်းချီကားတွေကို အီတလီခေါက်ဆွဲ၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ဆလတ်ရွက်၊ ငရုတ်သီးမှုန့် …စတဲ့ ဟင်းချက်စရာတွေနဲ့ ဖန်တီးပြီး ပန်းချီရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဟင်းချက်စရာတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ သူမ လက်ရာတွေကို …